Ingabe "kungukuhlakanipha kwezixuku" ngempela? | Martech Zone
Ingabe “kungukuhlakanipha kwezixuku” ngempela?
NgeSonto, ngoMashi 18, 2007 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
"Ukuhlakanipha kwezixuku" kubonakala kuyileli gama lomlingo leWeb 2.0 noMthombo Ovulekile. Uma u-Google igama, kunemiphumela engaba yizigidi eziyi-1.2, kufaka phakathi Wikipedia, blink, UMaverick eMsebenzini, I-Starfish neSicabucabu, Wikinomics, Njll
Ingabe kungukuhlakanipha kwezixuku ngempela?
IMHO, Angikholwa kanjalo. Ngikholwa ukuthi ngumdlalo wezibalo namathuba amaningi. I-Intanethi isinikeze izindlela zokuxhumana ngempumelelo nge-imeyili, izinjini zokusesha, amabhulogi, ama-wikis kanye namaphrojekthi wemithombo evulekile. Ngokwazisa igama ezigidini, awukhalisi ukuhlakanipha kwezigidi. Umane uletha imininingwane kwabanye abantu abahlakaniphile kuleso sigidi.
Uma amathuba ami wokuwina ilotho eyi- $ 1 million ebengu-1 ezigidini ezingama-6.5, bengingathenga ithikithi ngalinye kweziyizigidi ezingama-6.5 bese ngiwina. Kodwa-ke, ngiwine kuphela ngethikithi eli-1! Kwakungekhona ukuhlakanipha kokuthenga amathikithi ayizigidi ezingama-6.5… lokho bekuyisimungulu njengoba ngilahlekelwe ama- $ 5.5 million esivumelwaneni, angithi? Ukubeka imininingwane kuwebhu akubizi izigidi, noma kunjalo - kwesinye isikhathi kumahhala noma okungenani amasenti ambalwa.
Ngithola ukuphawula kubhulogi lami kuyefana… bengeza amaphuzu amnandi kokuthunyelwe. Ngiyawathanda impela amazwana - enza ingxoxo ihambe futhi inikeze ukusekelwa noma ukuphikisana nephuzu engizama ukulibeka. Kodwa-ke, kubo bonke abantu abayi-100 abafunda ibhulogi yami, ngu-1 noma 2 kuphela ababhala amazwana. Lokho akusho ukuthi abanye abafundi abakhaliphile (ngemuva kwakho konke, bafunda ibhulogi yami akunjalo?;)). Kusho nje ukuthi Ukuhlakanipha kwezixuku maqondana nokuqukethwe kwami ​​kungenxa yabafundi abambalwa kuphela.
Noma kungukuhlakanipha kokufinyelela ezixukwini?
Ngokufinyelela kokuningi, noma kunjalo, ngiyakwazi ukubamba labo bafundi abambalwa. Mhlawumbe akuyona ifayili le- Ukuhlakanipha kwezixuku, yiwona Ukuhlakanipha Kokufinyelela Izixuku.
Mar 18, 2007 ku-9: 53 PM
Mhlawumbe kufana nendali, lapho intengo yokugcina iqhutshwa ngamabhidi alandelanayo. Kulokhu i-intelligence quotient iqhutshwa ngabacabangi abalandelanayo- “Njengoba insimbi ilola insimbi, kanjalo-ke umuntu ulola ukuqonda komunye.” (IzA. 27:17)
Mar 18, 2007 ku-10: 41 PM
Leyo i-engeli ekhangayo kulokhu ebengingakaze ngiyicabange. Ngiyasithanda nesethenjwa seSaga. Ngiyabonga, Christine!
Mar 19, 2007 ku-12: 47 PM
"Umane uletha ulwazi kwabanye abantu abahlakaniphile kuleso sigidi"
Ngakolunye uhlangothi, okunye okusele kukhetha amaqiniso ayisigamu bese kubekwa phansi amanga alungile, bese kuthi imininingwane ibuyiselwe kwabanye. Singabonga ama-blogs nezithangami ngalokhu 😉
Mar 19, 2007 ku-6: 36 PM
Ngakolunye uhlangothi, ngemuva kokushiya isiza sakho, ngavakashela ibhulogi lekhasi lemibono lephephandaba lendawo nenye ibhulogi. Angijabule kakhulu ngezinye zalezo zingxoxo ngezinkinga ezilungile zepolitiki. Ngingasho ukuthi bavame ukuhamba ngenye indlela.